Xaalada Degmada Run-nirgood Ee Gobalka Shabeelada Dhexe Oo Degan. – Calamada.com
Xaalada Degmada Run-nirgood Ee Gobalka Shabeelada Dhexe Oo Degan.
Iyadoo maalintii shalay gudaha degmada Run-nirgood ee gobalka Shabeelada dhexe uu ka dhacay dagaal culus oo si ba’an loogu xasuuqay maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ayaa maalintii labaad waxaa degan xaalada degmadaasi.
Maamulka Islaamiga degmada Run-nirgood ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa si toos ah u maamulaya degamda’iyadoona dadkii shacabka ee horay uga barakacay degmada ay bilaabeen iney dib ugu laabtaan degmada maadaama maalintii shalay degmadaasi ay dagaal kula wareegeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Gudaha iyo degmada waxaa si aad ah looga dareemayaa raadadkii uu reebay dagaalkii cuslaay ee shalay ka dhacay degmada Run-nirgood ee gobalka Shabeelada dhexe’iyadoona dagaalkaasi lagu dilay 49 askari oo ka tirsan dowlada federaalka kuwaasi oo ay ku jiraan saraakiil sar sare.
Waaliga Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada dhexe oo habeenkii xalay la hadlay warbaahinta ayaa kaga mahadceliyay qeybaha bulshada iyo qabaa’ilka dega gobalka Shabeelada dhexe kaalintii ay ka qaateen dagaalkii sida ba’an loogu xasuuqay maleeshiyaatka dowlada Ridada ee maalintii shalay ka dhacay degmadaasi.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 25-07-1437 Hijri.
Next: Askar Ka Tirsan Dowlada Federaalka Oo Muqdisho Lagu Dilay.